Maxay Al-Shabaab u weerarayaan dalka Kenya? Daawo Video - iftineducation.com
Maxay Al-Shabaab u weerarayaan dalka Kenya? Daawo Video
iftineducation.com – Dowladda Kenya ayaa culeysyo ka imaanaya shacabka iyo mucaaradka kasoo fuulay dhanka wax ka qabashada amaanka, xili Maliishiyada taabacsan Al-Shabaab ay xasuuqii ugu darnaa ee ay ka geysato gobolka Soomaalida Kenya degto ee Mandheere.
Warbixin laga sii daayay Telefishinka K24 ayaa lagu soo qaatay sababta kaliftay in Al-Shabaab bartilmaameedsadaan shacabka Kenya ee aan waxba galabsan, iyadoo barnaamijkaan oo muuqaalo kala duwan leh oo xasuuqyadii Shabaab iyo wareysiyo lala yeeshay dadka ku xeel dheer amaanka ayaa isku raacay in Kenya balaayo ugu horeyn markii ay ciidamadeeda u dirtay Soomaaliya.
Arrin cusub oo hoteelada Muqdisho ka socota iyo xildhibaanada oo…..
Sawirro: Kooxdii Sheekh Shariif oo Xisbi kaga dhawaaqay Muqdisho